မူလစာမျက်နှာ - MIU ရှိကွန်ပျူတာပညာရှင်အစီအစဉ်
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မဟာဘွဲ့ရရှိ ယူအက်စ်အေအတွက် Paid အလုပ်သင်နှင့်အတူ
ကျွန်ုပ်တို့၏ video watch:
တစ်မူထူးခြားသောအစီအစဉ် ကျောင်းသားများ Worldwide ၏အဘို့:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရိကန်ကျောင်းဝင်းအပေါ်လေ့လာမှု 8-13 လအတွင်းနှင့်အတူစတင်။ S ကကျွမ်းကျင်သူဒြေ၊ ထိပ်တန်းပညာရှင်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်သောသင်တန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
တစ် ဦး က GET
International USA တွင်မဆိုကုမ္ပဏီအတွက် software ကို developer အဖြစ်အချိန်ပြည့်ပေးဆောင်လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင်အတူတက်မှနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
တစ် ဦး မာစတာရဲ့ဒီဂရီနှင့်အတူဘွဲ့ရ
ဘရာဇီး 2020 စုဆောင်းရေးခရီးစဉ်
မတ်လ7- မတ်လ 21, 2020
ရိုးရာမိမိကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဤခေတ်မီဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုနယ်ပယ်နှင့်ပေါင်းစည်းရန်ထူးခြားသောအစီအစဉ်တစ်ခုကိုခံစားပါ။ MIU တွင်သက်သေပြထားသောနည်းလမ်းသည်ကျောင်းသားများကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွင်အောင်မြင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ပေးသည်။
Leading Edge Technologies ကိုလေ့လာပါ
တစ်ဦးဆော့ဝဲရေးသားသူအဖြစ် USA တွင်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ဘယ်နေရာမှာမဆို
တစ်နှစ်လျှင်ပျမ်းမျှစတင်ကာ Internship နှုန်း $ 94,000
98% အချိန်ပြည့် Paid Internship နေရာထားရှိအောင်မြင်
MIU သည်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည် ယူအက်စ်ရှိကွန်ပျူတာသိပ္ပံမာစတာအစီအစဉ်
၂။ Maharishi စီမံခန့်ခွဲမှုတက္ကသိုလ် (၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် MIU ကိုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်)
Urbana-Champaign ရှိ Illinois တက္ကသိုလ်
6. Arizona ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ Tempe
7. ကယ်လီဖိုးနီးယား - San Diego မှတက္ကသိုလ်
9 ။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မက်ဆာချူးဆက်
10. Stevens နည်းပညာတက္ကသိုလ်
Raleigh မှာ 11. မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
12 ။ ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်
ချီကာဂိုမှာ 13. အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်
မက်ဆာချူးဆက် - အမ်ерхစ်၏တက္ကသိုလ်
16. Charlotte ရှိ North Carolina တက္ကသိုလ်
လုံခွုံသော & လှပသော Fairowa, Iowa ရှိ 365 Acre ကျောင်းပရဝုဏ်
မဟာရပ်ရှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကို ၁၉၇၁ တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနှင့်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးကော်မရှင်မှအသိအမှတ်ပြုသည်။
အချို့သော Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများ
4,000 ကျော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ & ကျောင်းသားဟောင်းများ
Computer Professionals Program သည် ၂၅ နှစ်ကြာလည်ပတ်ခဲ့ပြီး USA တွင် Computer Science Program ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမဟာဘွဲ့ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်း Genius ဖွံ့ဖြိုး
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်အောင်မြင်မှုရစေရန် ဦး ဆောင်သည့်ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသည်။ ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏သင်ယူမှုစွမ်းရည်နှင့်အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် Transcendental Meditation®နည်းစနစ်ကိုသင်ယူရန်အခွင့်အရေးရပါလိမ့်မည်။
ComPro ၀ င်ခွင့်အဖွဲ့သည်သင်၏အနာဂတ်ကိုအပ်နှံသည်
ComPro ကိုကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှစိတ်ဝင်စားမှုက ၀ င်ရောက်ခွင့်အဖွဲ့ကိုအလုပ်များစေပြီး…
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/Admissions-staff-on-bench-outside-McLaughlin.jpg 1079 1920 Dileep Krishnamoorthy https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png Dileep Krishnamoorthy2021-07-26 11:33:592021-07-26 11:33:59ComPro ၀ င်ခွင့်အဖွဲ့သည်သင်၏အနာဂတ်ကိုအပ်နှံသည်
ဇြန္လ 22, 2021
MIU ရှိကွန်ပျူတာသိပ္ပံပရိုဂရမ်မှ MS ကျောင်းသားများသည်ပါမောက္ခ Somesh Rao ၏…
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/Somesh-teaching-PM.jpg 341 512 Dileep Krishnamoorthy https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png Dileep Krishnamoorthy2021-06-22 11:26:012021-06-22 20:36:53လူကြိုက်များသောပါမောက္ခကကျောင်းသားများကိုတကယ့်ကမ္ဘာအောင်မြင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်သည်
ဗီယက်နမ်ပါရဂူဘွဲ့သည် MIU ၌သူ၏နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဦး နှောက်ကိုတိုးတက်စေသည်
မေလ 6, 2021
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/Tam-Van-Vo.jpg 607 736 Dileep Krishnamoorthy https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png Dileep Krishnamoorthy2021-05-06 12:02:492021-05-06 12:40:13ဗီယက်နမ်ပါရဂူဘွဲ့သည် MIU ၌သူ၏နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဦး နှောက်ကိုတိုးတက်စေသည်